Indlela yokusebenza nefomu lokusebenza lenqubo yokwelashwa kwendle ye-MBR-izindaba zezimboni-Shenzhen SH-MBR Technology Co., Ltd.
Indlela yokusebenza kanye nefomu elisebenzayo lenqubo yokuhlanza indle ye-MBR
Isikhathi: 2020-04-22 Hits: 53
Ubuchwepheshe bokulungiswa kokukhuculula indle i-MBR ikakhulukazi buhlanganiswa nomzimba we-reactor, izakhi ze-biofilm, uhlelo lwe-air aeration kanye nama-valve ahamba ngamapayipi axhuma uhlelo. Lapho udaba lwezinto eziphilayo kumgodi wokukhuculula udlula emzimbeni wethangi, ukusabela okuwohlokayo kokuphazamiseka kwamagciwane kuyokwenzeka ngaphakathi, ukuze ikhwalithi ephelele yamanzi okukhucululwa kwendle ihlanzwe. Umsebenzi oyinhloko we-biofilm ukudonsa ama-macromolecule, ama-bacterium kanye nezinto eziphilayo ezisebenzayo kokungcola okuku-reoror, ukuze ikhwalithi yamanzi angasebenzi kahle ifinyelele standard parameli ejwayelekile, futhi ngasikhathi sinye, futhi ingaqinisekisa isiphequluli I-sludge iyakhula, ngaleyo ndlela ikhuphula izinga lokuphendula kwezinto eziphilayo.
Ama-membrane we-Biological membrane ye-MBR ahlukaniswe izinhlobo ezimbili: ulwelwesi lwe-organic membranes. Izindleko eziphelele zefilimu ye-organic zishibhile, kepha zitholakala kakhulu ekungcolisweni nasekulimaleni. Ama-membranes we-inorganic abiza kakhulu ukukhiqiza futhi angasebenza ezindaweni eziningi ezinobunzima obuhlukahlukene, futhi impilo yabo yenkonzo nayo ingaqinisekiswa. Amamojula we-biofilm we-MBR ahlukaniswe ngokwemisebenzi yawo ehlukene ohlelweni lonke, kufaka phakathi i-MBR ehlukanisiwe, i-aRated MBR ne-MBR ekhishwa, njll. Imodyuli yokuhlukanisa ye-MVR icishe ifane nethangi lokulinganisa lesibili kubuchwepheshe bendabuko bokulapha ubuciko. Kungenxa yokuthi izinga lokuncishiswa kobuchwepheshe bokulashwa kwendle i-MBR liphezulu kakhulu, okuholela ekuqoqweni okukhulu kwemvelo kwi-bioreactor, nesikhathi sokuhlala kwe-sludge Longer, ngakho-ke ikhwalithi yamanzi ngemuva kokulashwa kwendle i-MBR ingcono. Imodyuli ye-aRated MBR inganikeza i-oksijini ku-bioreactor ngokusebenzisa i-biofilm enokuphefumula, futhi umoya-mpilo ungangena ujwayezwe futhi usebenze ngokuphelele ngaphandle kokwenza ama-bubble. Imodyuli ye-MBR biofilm yokukhishwa ihlanganiswa namashubhu we-silicon enamashubhu we-fiber bundle eyakhelwe ngaphakathi. Lezi zinqwaba ze-fiber zingathola ngempumelelo ukungcoliseka emanzini abilayo futhi zifinyelele ukonakaliswa nge-adsorption yama-microorganisms.
Okuhlukile ekuhlanganiseni kwe-Reactor ne-membrane, i-bioreactor yobuchwepheshe bokwelapha indle ye-MBR nayo ingahlukaniswa ngezinhlobo ezimbili: ihlukaniswe futhi ihlanganiswe. Uhlobo lokwehlukaniswa, njengoba negama lisho, kusho ukuthi ukuhlelwa kwemodyuli ye-biofilm ne-reactor kuhlukile, futhi ukuqhutshwa kohlelo lonke kuqhutshwa yiphampu yengcindezi.
Inzuzo yohlobo lokwehlukaniswa ukuthi uhlelo lonke luzinzile futhi luphephile, ukusebenza kulula kakhulu, futhi ukuhlanza nokufaka esikhundleni se-membrane nakho kulula. Okubi ukuthi izidingo zamandla ziphakeme. Ifomu elihlanganisiwe ukubeka imodyuli ye-membrane ku-bioreactor, futhi usebenzise iphampu ye-vacuum ukuthola amanzi ukuphuma. Le ndlela yokucubungula inezindleko eziphansi zokusebenza, kepha sisekhona igebe elithile phakathi kokuqina nokuncipha kokusebenza nohlobo lokwehlukanisa.
Okwedlule: Izinzuzo zenqubo yokuphathwa kwamanzi amdaka ye-MBR
Okulandelayo: Ucwaningo ngenqubo ye-MBR Sewage Treatment inqubo